Manovo hery ao amin’ny fangatsiahan’ny hafa
"Ary noho ny haben'ny tsy fankatoavan-dalàna dia hihamangatsiaka ny fitiavan'ny maro. Fa izay maharitra hatramin'ny farany no hovonjena." - Mat 24:12,13.
"Ary noho ny haben'ny tsy fankatoavan-dalàna dia hihamangatsiaka ny fitiavan'ny maro".
Voaloton'ny fahotana izao rivotra iainantsika izao. Tsy ho ela dia hosedraina amin'ny fitsapana mivaivay ny vahoakan'Andriamanitra, ary ny ankamaroan'ireo izay miseho ho tena izy sy marina dia ho hita ho metaly sandoka. Handray amin-kanosana ny toeran'ny mpanohitra izy ireo, raha mba tokony hahazo hery sy tanjaka eo anatrehan'ny fanoherana sy ny fandrahonana ary ny famelezana. Izao no teny fikasana: "Izay manome voninahitra Ahy no homeko voninahitra". (...)
Efa mihatra amin'ny tany ny fitsaran'Andriamanitra, izay hita eo amin'ny tafio-drivotra samihafa, ny tondra-drano, ny horohoron-tany, ireo loza an-tanety sy an-dranomasina. Ilay IZAHO IZAY IZY lehibe dia miteny amin'ireo izay manao tsinontsinona ny lalàny. Iza no afaka hijoro, raha hirotsaka manerana ny tany ny fahatezeran'Andriamanitra? Fotoana izao ho an'ny vahoakan'Andriamanitra, mba hanehoany fa mahatoky amin'ny lalàna izy ireo. Rehefa hatao tsinontsinona indrindra ny fivavahan'i Kristy, ary hozimbazimbaina ny lalany, dia tokony hafana indrindra ny zotom-pontsika, ary tsy hihontsona ny herim-pontsika sy ny faharetantsika. Ny mijoro hiaro ny fahamarinana sy ny fahitsiana raha toa ka mandao antsika ny maro, ny miady ireo adin'ny Tompo rata toa ka vitsy ny mpandresy — izany no ho fisedrana antsika. Amin'izao fotoana izao no tokony hanangonantsika hafanana manoloana ny fangatsiahan'ny hafa, sy herim-po manoloana ny hakanosany, ary fahatokiana manoloana ny toetrany mpamadika (...)
Ilay Kapitenin'ny famonjena antsika no hampitombo ny herin'ny vahoakany ho amin'ny ady izay tsy maintsy handraisan'izy ireo anjara (...) Izao no fotoana tokony hifandraisantsika akaiky amin'Andriamanitra, mba hovoafina isika raha hirotsaka amin'ny zanak'olombelona ny fahatezerany. - TFC 5:136,137.
Ireo rehetra manangona hafanana manoloana ny fangatsiahan'ny hafa, sy herim-po manoloana ny kileman-toetrany, ary fahatokiana manoloana ny famadihany, no hahazo fandresena miaraka amin'ilay hafatry ny anjely fahatelo. - RH, 8 Jona 1897.